Transportzọ njem nke Urdolls na-akwado
Anyị na-enye njem dị mma ma dị mma
Usoro njem na-ewe ihe dị ka ụbọchị 4-5, ọ dịkwa mma ma nwee ntụkwasị obi. Ikwesiri ịkwụ ụgwọ obere mbupu.
Usoro njem na-ewe ogologo oge ma na-ewerekarị ụbọchị 8-10.
Anyị ga-ebuga ya n'ime ụbọchị 5-7. Anyị na-ebuga ụwa n'efu. Ọnụahịa na mba ọ bụla na-eburu urdolls.
Mkpokọta nnyefe oge (Ọ na-ewe ihe dị ka ụbọchị 19-30) gbakọọ site na mgbe enyere iwu gị rue oge enyere gị ya. Mkpokọta nnyefe oge agbajiri n'ime oge nhazi na oge mbufe.
Oge nhazi: Oge ọ na-ewe iji kwadebe ihe gị (s) iji zipu n'ụlọ nkwakọba ihe anyị. Nke a gụnyere ịkwadebe ihe gị, ịme ndenye ego dị mma, na iburu maka mbupu. (Ọ na-ewe ihe dị ka ụbọchị 5-7)
Mbupu oge: Oge maka ihe (s) ka ị si n'ụlọ nkwakọba ihe anyị wee ruo ebe ị na-aga. (Ọ na-ewe ihe dịka ụbọchị 14-21)